အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Tick-borne encephalitis vaccine)သည် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တီဝိုင်၂၁အေ (Ty21a) နှင့် အတောင့်ပုံစံရှိသော ဗီပေါ်လီစက္ကရိုက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဗီကဲပ်စူလာ ပေါ်လီစက္ကရိုက်ကာကွယ်ဆေး(Vi capsular polysaccharide vaccine)ဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိနိုင်သည်။ တီဝိုင်၂၁အေသည် အသက်ရှိသေးသော ရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပါးစပ်မှ တိုက်ကျွေးရသည်။ ဗီကဲပ်စူလာ ပေါ်လီစက္ကရိုက်ကာကွယ်ဆေးသည် ရောဂါပိုး၏ပဋိပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး(subunit vaccine) ဖြစ်ပြီး ထိုးဆေးဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားကို မူတည်၍ ဆေးထိုးပြီး ပထမ(၂) နှစ်အတွင်းတွင် (၃၀-၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ အဖြစ်များသည့်နေရာတွင်နေသော ကလေးများအားလုံးကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနေရာများတွင်တော့ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများကိုသာ ဆေးထိုးသင့်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့် အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်း ကူးစက်ရောဂါများကို တိုက်ဖျက်နိုင်သည်။ ဆေးထိုးခံပြီးနောက်(၁-၇)နှစ်ကြာတိုင်း လိုအပ်သလို ထပ်ဆင့်ဆေးများထိုးရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောနေရာသို့သွားမည့် ခရီးသည်များကဲ့သို့ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများကိုသာ ဤကာကွယ်ဆေးပေးရန်အကြံပြုထားသည်။ 
ယခုအသုံးပြုနေသော အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးများမှာ အလွန်စိတ်ချရသည်။ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်ဖြစ်တတ်သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသူများအတွက် ထိုးဆေးကို စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာမပေါ်သေးသရွေ့ သောက်ဆေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သောက်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိ၊မရှိကိုတော့ သေချာစွာ မသိရသေးပါ။
ပထမဆုံး အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အယ်လ်ရော့ အဲဒ်ဝေါ့ ရိုက်(Almroth Edward Wright)၊ ရစ်ချတ် ဖိုက်ဖာ (Richard Pfeiffer)နှင့် ဝယ်လ်ဟမ် ကိုးလ်(Wilhelm Kolle)တို့မှ (၁၈၉၆)ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်သော ကာကွယ်ဆေးများမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပို၍နည်းသောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုသာ အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (၄.၄၄)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂၅-၅၀)ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Typhoid vaccines: WHO position paper." (8 February 2008). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations 83 (6): 49–59. PMID 18260212.
↑ "Vaccines for preventing typhoid fever." (2 January 2014). The Cochrane database of systematic reviews 1: CD001261. doi:10.1002/14651858.CD001261.pub3. PMID 24385413.
↑ Typhoid VIS (2012-05-29)။ 15 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Flower၊ Darren R. (2008)။ Bioinformatics for Vaccinology.။ Chichester: John Wiley & Sons။ pp. 40–41။ ISBN 9780470699829။
↑ Vaccine, Typhoid။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=342817" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၁:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။